I-17 EDUMILEYO YEE-80 ZEENWELE ZAMADODA (ISIKHOKELO SEZITAYILE ZIKA-1980) - IINWELE ZAMADODA
Izitayile eziBalaseleyo ze-80s zaMadoda
Eyona Iinwele Zamadoda Izitayile eziBalaseleyo ze-80s zaMadoda
I-80s yayishumi elinempembelelo kwizinwele zamadoda. Ebonakaliswa yimikhwa ekrakra yefashoni kunye nezitayile zokugqitha, ii-80s zezinwele zazingafani kwaye ziyimbonakalo. Iqukethe iimvume, i-mullets, phezulu, Jheri…
I-80s yayishumi elinempembelelo kwizinwele zamadoda. Ebonakaliswa yimikhwa ekrakra yefashoni kunye nezitayile zokugqitha, ii-80s zezinwele zazingafani kwaye ziyimbonakalo. Ifaka iimvume, i-mullets, iincopho eziphakamileyo, ii-curls zeJheri, iinwele ezinoboya kunye nee-mohawks, ii-1980s zanikezela ngeendlela ngeendlela zokuthayipha iinwele ezinde, eziphakathi nezimfutshane. Ngelixa ezinye zezi ntlobo zeenwele zithwelwe ngee-90s, ezinye bezingcono xa besifa kwaye belityelwe. Ingaba ukhangele isitayela se-retro yeklasikhi okanye ulungele i-themed party, jonga i-80s zezinwele ezingcono zamadoda. Ngezinye zeenwele ezithandwayo zamadoda zexesha elibuyayo, jonga esi sikhokelo sokuphefumlela iinwele zakho kwixesha elizayo!
1Izitayile ze-1980 zeenwele zamadoda
1.2Iinwele ezinkulu ngeVolumu
1.3Ukuphela okuphezulu okuphezulu
1.4Izinwele eziKhuselweyo eziBuyile
1.9Inwele yomfana entle
1.13Izitayile ze-80s zeRock
1.14Iinwele eziqhelekileyo zeRockabilly
1.15Iinwele zama-80s zePunk
1.16Izitayile zee-80s zabafana
Izitayile ze-1980 zeenwele zamadoda
Inkqubo ye- imvume yayinjalo kwaye iselolusu lwe-iconic yamadoda. Namhlanje, iikhoyili ezixineneyo zibonakala zendalo ngakumbi, kwaye zidibana ngokugqibeleleyo nezinye iindlela. Ukusuka kwi-undercut ukuya ekuphelisweni, uya kuyinyikima le 80s yeklasikhi ngomzamo omncinci. A Imvume yamadoda kukucheba ixesha elide, nako. Ngelixa kuthatha ukuzibophelela ukunamathela kwisitayile ukuya kuthi ga kwiinyanga ezintandathu, kukwathetha ukuba iinwele zakho ezintsha ziya kuba yimpepho kuba zibandakanya ukugcinwa okuncinci.
Iinwele ezinkulu ngeVolumu
Iinwele ezinkulu yayisigaba sama-80s esasifakwe ngokuthandwa nguDavid Hasselhoff kwi Umkhweli we Knight . Ngaphandle kokuba nomthamo, yayihlala inde, ngakumbi ngasemva. Oku kuyivumele ukuba iqukuqele ngelixa ihlala iqinile endaweni. Ukuba ufuna ukuzama iinwele ezinkulu ngevolumu namhlanje, uyakufuna ikama eqinileyo kunye neninzi yeenwele zokukhupha le nto ikhumbulekayo yama-80s.
Ukuphela okuphezulu okuphezulu
Abarepha kunye neenkwenkwezi ze-hip-hop benza ezona ziphezulu ziphelise ezabo kwii-80s, kunye noBig Daddy Kane ongoyena mntu udumileyo wokukhupha le ndlela yokuthambisa. Ukuphela okuphezulu okuphezulu kwabonakala kugudile kwaye kulungisiwe kangangokuba kwaqhubeka ukuya kwi-90s kunye noWill Smith INkosana entsha ye-Bel-Air . Usebenzisa ukucoca okucocekileyo emacaleni ngevolumu eyongeziweyo ngaphezulu, le nwele yayimangalisa ngokumangalisayo. Abathwali banamhlanje bangayidibanisa nezoyikeka okanye ukujija ukwenza ukuba ikhetheke.
Ukuba ubunayo iinwele ezibuyile umva ngoo-80s, ubusenokuba ungumdlali oseWall Street. Iinwele ezisikiweyo ezingasemva ziyindoda, kwaye zinika isibheno samandla kwangoko kulowo uzinxibileyo. Cinga uMichael Douglas noCharlie Sheen kwii-80s zakudala Idonga isitalato . Ngoku, iza ne undercut emqolo nasemacaleni , kodwa ayisusi kwisitayile esomeleleyo esenza ukuba ibonakale kwisihlwele.
IJheri curl i-iconic kuba igqithisile iintlobo. Ngama-80s, kwakungakhathali nokuba ngaba uyi-gangsta, inkwenkwezi ye-pop, okanye i-crooner - wonke umntu wafumana iinwele ezivumelekileyo kunye nezitayile zeJheri curls. UMichael Jackson wenza udumo, kunye nokuthandwa nguLionel Richie, iNkosana kunye ne-Ice Cube. Yayithandwa kuba yaguqula iinwele ezifakwe efro-curls zaba zii-curls ezikhululekileyo kunokuba yimvume eqinileyo okanye inabukeni 'ngapha. Ibhalwe ngokugqibeleleyo, isebenza kuzo zonke iintlobo zobude unanamhla.
Akukho nto ilondolozwa kancinci njenge- ukusikwa kwe-buzz . Iqhotyoshelwe ngaphakathi kwe intshi ye-scalp, yayiyintandokazi kaTom Cruise kwii-80s kuba ifuna ukugcinwa kancinci kwaye akukho sitayile. Yintoni eyenza ukuba olu hlobo lufikeleleke kukuba lulungele iintlobo zobuso ezininzi kwaye aludingi yingcali. Thatha ii-clippers zakho, uzibeke kuseto olufunwayo, kwaye uye entlokweni yakho amaxesha ambalwa ukuze iinwele zakho zifane ngaphambi kokujonga esipilini.
Sika ngokucheba amacala kwaye ubuyele eluswini kwaye ushiye umgca embindini, i-mohawk yayiyeyona nto ibalaseleyo ye-80s ejika iintloko. Nangona umbutho wepunk uyamkele, uMnu T wayenza yaziwa Iqela . Ukuba nesibindi kunye nokudinwa, unokuphinda uyenze le nkangeleko kwaye wenze ingxelo ebhaliweyo ngesiphatho esigqithileyo. Ipeyinti ende yeenwele ezinamajeli yongeza imvukelo ukuba ukhetha isitayile esimangalisayo ngaphandle kwenombolo enye.
Ukusuka eHollywood ukuya kwilizwe elisemaphandleni, i-mullet yayizithandwa kakhulu zezinwele zamadoda kwii-80s. UMel Gibson noAndre Agassi bakhetha ishishini ngaphambili kunye nepati ngasemva. Yayingeyongqwalaselo kuphela enomtsalane, kodwa yayihambelana nobume bobuso obuninzi, iyenza ukuba icace. I-mullet ayibuyi ngendlela efanayo nezinye izitayela ze-80s, kodwa igqibelele kumadoda afuna ukugqama esixekweni ngesitatimende esine-sleek-yet-messy.
Inwele yomfana entle
Yamkelwe ngamakhwenkwe amahle angaphambili, oku kujongeka kunokuthenjwa kunqunyulwe ngaphandle kokungqindilili njenge mullet okanye iperm. Kwakungqinelana kwaye kuyadingeka ecaleni kokungabikho kolondolozo, yiyo loo nto yenzelwe ukujonga nje ebhedini.
ithini inyanga yam kunye nophawu oluphumayo
Iipunks zalawula ixesha lama-80s, kwaye akukho mntu wanyikimisa iinwele ezidayiweyo njengeePistols zoSondo. Ukubamba ngamehlo okumangalisayo, uSid Vicious noJohnny Rotten banokuqinisa ukuzazisa kwabo ngokutshintsha umbala weenwele zabo ukusuka kumbala otyheli ukuya koluhlaza ukuya kobomvu ukuya kupinki ukuqaqambisa ubuntu babo. Kungcono ukuya kumchebi weenwele okanye weenwele ukuba ufuna ukubuyisa olu hlobo njengoko iblitshi ingonakalisa iinwele zakho.
U-Billy Idol wenza iinwele ezi-spiky ezinemfashini kuba zazinenkcazo entle kwaye zinembonakalo entle. Iinwele zeSpiky ziyasebenziseka nabuphi na ubude beenwele, nangona isitayile sisebenza ngcono ngeenwele ezimfutshane. Inguqulelo yama-80s yayiquka iingcebiso ezinqabileyo okanye iblitshi, okuthetha ukuba ungadibanisa iinwele ezicocekileyo kunye neenwele ezidayiweyo kwizinwele zokugqibela.
UFarrah Fawcett wenza iinwele ezinamasiba zaduma emva kweminyaka yama-70s, kwaye abafana abanjengoJames Spader babaleka nayo kwii-80s. Eyilwe ngokusika kumaleko kunye nokwahlukana kweziko, lityhalelwa ngasemva ukwenza ubuso obude buvele bujikeleze ngakumbi. Yindlela ebalaseleyo yamadoda aneenwele eziphakathi-ubude ukongeza ubume.
Izitayile ze-80s zeRock
Iinwele zeerwala kwii-80s zinokuba zinde kwaye zonakalise okanye zilungelelaniswe kwaye zichazwe. Nokuba yayinguTommy Lee wodumo lweMotley Crew okanye uJon Bon Jovi, ii-80s ze-rockstar zezinwele ezazisebenzisa i-gel kunye ne-hairspray yokugqibezela ngesibindi. Isengamadoda afuna ukuphinda-phinda amaqela abawathandayo okanye iimvumi.
Iinwele eziqhelekileyo zeRockabilly
Nangona iinkwenkwezi ze-50s zebhanyabhanya zaphula lo mkhwa, ukuthanda kukaMat Dillon kunye noRob Lowe bazisa iinwele ze-rockabilly kwii-80s zefilimu. Abangaphandle . Mfutshane emacaleni kunye neenwele ezigcwele umva ngaphezulu, abantu abadumileyo abangama-80s bakhusele ukubonakala kweenwele zegrisi nge ipomade eyongeze umanzi, ukugcoba okunamafutha kwaye yabamba iinwele ngokuqinileyo endaweni yazo.
shwabene neenwele ezinde ngaphezulu
Iinwele zama-80s zePunk
U-Sid Vicious wayeyinxalenye ephambili yeenwele ezingama-80 ze-punk, umxube wee-mohawks ezi-spiked ezazidaywe, ngenxa yokuzinikela kwisitayile. Eyona yakhe yayiyeyona inkulu, ingxolayo, kunye neyona punk inwele evakalisa ubuntu bakhe obupholileyo nobukhaliphile.
Izitayile zee-80s zabafana
Mhle kwaye ujonge umsulwa, amakhwenkwe amakhwenkwe kwii-80s ajolise kwizitayile ezilula endaweni yokusika okuthandekayo kweHollywood. Ukusuka kwisitya se-dorky sika sikaLeonardo DiCaprio ekubukekeni kobutsha ebutsheni beminyaka elishumi, ii-hairstyle zamakhwenkwe zika-1980 zazingathandeki kwaye zithandeke njenge iinwele zabantwana ezihamba phambili namhlanje.
Eyona ndawo ilungileyo yokuLungisa iinwele
I-35 Eyona nto ilungileyo yokucheba abantwana
I-25 ye-Braids yeenwele zamadoda
25 UDavid Beckham weenwele
Ukucheba iinwele okungcono kwamadoda aMnyama
Isitayile seBun Bun
star wokubala uphawu
ubudlelwane synastry free
ukucheba iinwele ezinde kumakhwenkwe
ukuphuma kwelanga ngokuvumisa ngeenkwenkwezi
Izindlu ezili-12 zokuvumisa ngeenkwenkwezi
Ikama Ngaphezulu kweFade yokucheba iinwele
I-101 yeeTattoos eziMnqamlezo eziBalaseleyo zaMadoda